I-Daintree Magic Daintree Rainforest CapeTribulation - I-Airbnb
I-Daintree Magic Daintree Rainforest CapeTribulation
Daintree, Queensland, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Kate
I-Daintree Magic iyindlwana enhle yokuzimela, engu-3 bdrm ebekwe phezulu esiqongweni sezihlahla ze-tropical World Heritage Daintree Rainforest, eduze nase-Cape Tribulation. Inokubukwa okumangalisayo kolwandle, ebheke uLwandle iCoral kanye neGreat Barrier Reef. Iyindawo eseduze kakhulu yolwandle, enokuthula, engasese, ethule futhi ephumuzayo, imisindo kuphela izinyoni namagagasi.
Lokhu kuhlehla okumangalisayo kuzinzile ngokugcwele ngamandla elanga namanzi emvula, kulungele labo abafuna ukuphuma kugridi.
I-Daintree Magic Holiday House, ifika inefenisha ephelele futhi izimele ngokwayo, nayo yonke ilineni namathawula anikeziwe. Yindawo yokuhlala eseduze kakhulu nolwandle. Ukuhamba nje imizuzu eyi-8 ukuya ebhishi elihle laseCow Bay. Kukhona iGreat Barrier Reef ngaphambili futhi ulwandle luyaqala, amamitha angu-20 nje ukusuka esihlabathini! Kukhona ama-Cassowaries azulazulayo futhi abonwa izivakashi zethu njalo. Kunemigodi yokubhukuda yamanzi ahlanzekile, amakhefi, izindawo zokudlela kanye nokuvakasha konke eduze.
Kukhona igumbi lokugezela elikhulu elimangalisayo kuveranda ongaphambili elibheke ukubukwa kolwandle kanye ne-hammock yokuphumula.
Lena yindlu yeholide ephelele ukuze uphumule futhi ubalekele kuwo wonke umhlaba. Ihora elingu-1 kuphela enyakatho yePort Douglas.
Siyakwazi ukuzinza ngokugcwele, sisebenza ngamandla elanga namanzi emvula, sine-satalite wi fi elinganiselwe, kodwa ayanele ukusetshenziswa ngokweqile, kukhona nocingo lwasendlini lokushaya izingcingo zendawo nokwamukela izingcingo. Uma ufuna ukunikeza umndeni inombolo yendlu ngesikhathi usahlala khona ithi 07 40989193.
Indlu inamanzi ashisayo egesi, isitofu segesi nohhavini onegrill yokwenza i-toast, isiqandisi sikagesi.
Azikho ezomisa izinwele noma iziqondiso zezinwele ezivunyelwe ngenxa yamandla elanga. Kukhona ijeneretha yokwenza isipele samandla uma i-solar ike yanqamuka, okulula kakhulu ukuyivula.
Kukhona izindawo zokuwasha izandla kodwa awekho umshini wokuwasha. Uma udinga ngempela ukuwasha, kunemishini yomphakathi e-Lync Haven phezulu komgwaqo.
I-Daintree Magic Holiday House inendawo yokuhlala ubusuku obuyimizuzu emi-3.
Sitholakala enkabeni yeWorld Heritage Daintree Rainforest, eduze kwaseCape Tribulation futhi emaphethelweni e-The Great Barrier Reef. Lena indawo eyivelakancane emhlabeni lapho ihlathi lemvula lihlangana khona neReef!
Sinikeza izivakashi zethu ubumfihlo obuphelele, kodwa ngiyazishayela ucingo ukuze ngihlole ukuthi zihamba kanjani futhi ngihlole ukuthi zinemibuzo. Kukhona ucingo lwasendlini oluhlinzekiwe endlini, ngakho bangangishayela noma yimiphi imibuzo nganoma yisiphi isikhathi.
Sinikeza izivakashi zethu ubumfihlo obuphelele, kodwa ngiyazishayela ucingo ukuze ngihlole ukuthi zihamba kanjani futhi ngihlole ukuthi zinemibuzo. Kukhona ucingo lwasendlini oluhl…
Hlola ezinye izinketho ezise- Daintree namaphethelo